Lixabiso iGroove Type Compost Turner Machine Yokwenza iCompost Organisation yeNkunkuma kunye nabaXhasi beMfuyo kunye neFektri | YiZheng
Uhlobo lweGroove Composting Turner Umatshini Isetyenziselwa ukubila kwenkunkuma yendalo efana nemfuyo kunye nomgquba weenkuku, inkunkuma yedaka, iswekile yokuhluza isityalo, intlenge kunye notyiwayo. Isetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zezichumiso zendalo kunye nezityalo ezihlanganisiweyo zezichumiso zokuvundisa i-aerobic.
Yintoni i-Groove Type Composting Turner Machine?
Uhlobo lweGroove Composting Turner Umatshini ngowona matshini wokucoca iarobic osetyenziswa kakhulu kunye nezixhobo zokuguqula umgquba. Kubandakanya ishelufu yomjelo, umkhondo wokuhamba, isixhobo sokuqokelela amandla, ukujika indawo kunye nokudlulisela isixhobo (ikakhulu esetyenziselwa umsebenzi weetanki ezininzi). Isabelo esisebenzayo somatshini wokujika umgquba sisebenzisa ukuhanjiswa kwe-roller okuqhubela phambili, okunokuphakanyiswa kwaye kunganyusi. Uhlobo oluphakanyiswayo lusetyenziswa ikakhulu kwimeko yokusebenza ngobubanzi obujikayo obungagqithanga kwi-5 yeemitha kunye nobunzulu bokujika obungagqithi kwi-1.3 yeemitha.
Isebenziselwa ntoni iGroove Type Compost Turner?
(1) Uhlobo lweGroove lokujika umgquba esetyenziselwa ukuvundiswa kwenkunkuma yendalo efana nemfuyo kunye nomgquba weenkukhu, indawo yokulahla udaka, udaka lokucoca isityalo seswekile, umgubo wekhekhe lomgubo kunye nomququ wesarha yomququ.
(2) Jika uvuselele izinto kwitanki yokubila kwaye ubuyele umva ukuze udlale ifuthe lokujika okukhawulezayo kunye nokushukumisa, ukuze ufezekise unxibelelwano olupheleleyo phakathi kwento kunye nomoya, ukuze ukubila kwezinto kulunge.
(3) Uhlobo lweGroove lokujika umgquba sisixhobo esisisiseko se-composting ye-aerobic. Yeyona mveliso iphambili echaphazela inkqubela phambili yoshishini lomgquba.
Ukubaluleka kwe Uhlobo lweGroove lokujika umgquba kwindima yayo kwimveliso yomgquba:
1. Ukuxuba umsebenzi wezithako ezahlukeneyo
Kwimveliso yesichumiso, ezinye izinto ezincedisayo kufuneka zongezwe ukulungisa umlinganiso wekhabhoni-nitrogen, i-pH kunye nomxholo wamanzi wezixhobo ezingafunekiyo. Izinto eziphambili ezingafunekiyo kunye nezixhobo ezibumbeke ngokudibeneyo, injongo yokuxubana okufanayo kwezinto ezahlukeneyo inokufezekiswa ngelixa ujika.
2. Lungelelanisa iqondo lobushushu bemfumba yezinto zekrwada.
Isixa esikhulu somoya omtsha sinokuziswa kwaye siqhakamshelane ngokupheleleyo nezinto ezingafunekiyo kwimfumba yokuxuba, enokunceda iintsholongwane ze-aerobic ukuba zivelise ubushushu bokubumba kunye nokunyusa ubushushu bemfumba, kwaye ubushushu bemfumba bunokuphola ngokuzaliswa rhoqo kokutsha umoya. Ke loo nto yenza imeko yokutshintsha kobushushu obuphakathi-phakathi, kunye neebacteria ezincinci eziluncedo zikhule kwaye zivelise ngokukhawuleza ngexesha lobushushu.
3. Ukuphucula ukufumaneka kweemfumba zempahla eluhlaza.
Inkqubo ye- Uhlobo lwe-groove lokuguqula umgquba Ungaqhubekeka umbandela ube ngamaqhekeza amancinci, usenza izinto zibe yinyani kwaye ziqine, zibhetyebhetye kwaye zi-elastic, zenze i-porosity efanelekileyo phakathi kwezixhobo.
4. Lungisa ukufuma kwemfumba yempahla ekrwada.
Umxholo ofanelekileyo wokufuma kwezinto eziluhlaza imalunga nama-55%. Xa kubila ukusebenza kokujika, ukusebenza okusebenzayo kwe-biochemical ye-microorganism ye-aerobic kuya kuvelisa ukufuma okutsha, kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezingafunekiyo ngamagciwane atya ioksijini nako kuya kwenza ukuba amanzi alahlekelwe ngumthwali kwaye aphume. Ke ngoko, ngenkqubo yokuchumisa, amanzi aya kuncitshiswa ngexesha. Ukongeza kulophuko olwenziwe kukuqhutywa kobushushu, ukujika kwezinto ezingafunekiyo kuya kwenza umphunga wamanzi osisinyanzelo.
Ukusetyenziswa koMatshini weGroove Type Composting Turner
1. Isetyenziselwa ukubila nokususa amanzi kwizityalo zezichumiso zendalo, izityalo zezichumisi ezihlanganisiweyo, iifektri zenkunkuma, iifama zokulima kunye namasimi amakhowa.
2. Ilungele ukuvundiswa kwe-aerobic, inokusetyenziswa ngokudibeneyo namagumbi okubila elanga, iitanki zokuvumba kunye neeshift.
3. Iimveliso ezifunyenwe kubushushu obuphezulu be-aerobic ferment zingasetyenziselwa ukuphucula umhlaba, ukutyala igadi, ikhava yokugcwalisa umhlaba, njl.
Izinto eziphambili kulawulo lokuvuthwa komgquba
Ummiselo we-carbon-nitrogen ratio (C / N)
I-C / N efanelekileyo yokubola kwezinto eziphilayo ngezinto eziphilayo ezimalunga ne-25: 1.
2. Ulawulo lwamanzi
Ukucoca amanzi kumgquba kwimveliso eyiyo kulawulwa ngama-50% ~ 65%.
3. Ukulawulwa komoya womgquba
Ukuhanjiswa kweoksijini yento ebalulekileyo kwimpumelelo yomgquba. Kukholelwa ngokubanzi ukuba ioksijini kwimfumba ilungele i-8% ~ 18%.
4. Ulawulo lobushushu
Ubushushu yinto ebalulekileyo echaphazela ukusebenza ngokugudileyo kweentsholongwane zomgquba. Iqondo lobushushu lokuvunda lomgquba lobushushu obuphezulu ngama-50-65 degrees C, eyeyona ndlela isetyenziswa ngoku.
5. Ulawulo lweetyuwa (PH)
I-PH yinto ebalulekileyo echaphazela ukukhula kwamagciwane. I-PH yomxube womgquba kufuneka ibengu-6-9.
6. Ulawulo olunukayo
Okwangoku, ezinye ii-microorganisms zisetyenziselwa ukunciphisa.
Izinto eziluncedo zeGroove Type Composting Turner Machine
(1) Itanki yokubila inokukhutshwa ngokuqhubekekayo okanye ngesixa.
(2) Ukusebenza okuphezulu, ukusebenza ngokutyibilikayo, okuqinileyo nokuhlala ixesha elide.
Uhlobo lweGroove Composting Turner Machine Umboniso weVidiyo
Uhlobo lweGroove Composting Turner Model
Isantya sokuhamba （m / min）
Umthamo (m3 / h)
Egqithileyo IsiXhobo seTshayina esinevolontiya seVenkile eQhelekileyo - Isixhobo sokuzihambisa ngokwakho esenziwe ngokwaso - YiZheng
Okulandelayo: Ityathanga leTyathanga Ukujika komgquba
Ityathanga leTyathanga Ukujika komgquba
Intshayelelo Yintoni i-Plate yeComposting Turner Machine? Umatshini we-Chain Plate Composting Turner unoyilo olusengqiqweni, ukusetyenziswa kwamandla kweemoto okuncinci, isixhobo esihle sokunciphisa izixhobo sokuhambisa, ingxolo ephantsi kunye nokusebenza kakuhle. Amalungu aphambili anje: Umxokelelwane usebenzisa umgangatho ophezulu kunye neendawo ezizinzileyo Inkqubo yeHydraulic isetyenziselwa ukuphakamisa ...